राजनीति Archives | Page2of 41 | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - LIVE : दशकभित्रै समृद्धि र सम्मानित अवस्थामा देशलाई पुर्‍याउने - page 2
LIVE : दशकभित्रै समृद्धि र सम्मानित अवस्थामा देशलाई पुर्‍याउने
काठमाडौँ । सरकारले एक दशकभित्रै समृद्धिसहितको सम्मानित अवस्थामा देशलाई पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दश वर्षभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सम्मानित बनाउने घोषणा गरेको हो। सरकारले बुद्ध र सगरमाथाले चिनिने मुलुकलाई समृद्ध मुलुकको रुपमा सम्मानित बनाइने उल्लेख गरेको हो। सरकारले कुनै बहानामा सरकारी काममाजोरजुलुम र अराजकता स्विकार नहुने बताएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रंगशालानको नाम परिवर्तन गरेर बजेट बिनियोजन गरेका कारण झापाको कमल गाउँपालिका निर्माणधिन आदिवासी रंगशाला निर्माण अलपत्र परेको छ । २०६६ सालमा रंगशाला निर्माणधिन क्षेत्रमा रहेका ७ सय ४५ आदिवासीको चिहान हटाएर ‘आदिवासी रंगशाला’ सहित स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सोहि सहमति अनुसार नेपाल सरकारमार्फत बजेट बिनियोजन भएर रंगशाला निर्माण सुरु भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशमा रंगशालाको नाम परिवर्तन गर्ने काम भएपछि निर्माण अलपत्र परेको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कले आरोप लगाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
देशमा व्यापक भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन : अध्यक्ष यादव
काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी काँग्रेसले संघीयता, धर्म निरपेक्षता र भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ । समाजवादी काँग्रेसले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा देशमा व्यापक भ्रष्टाचार बढेकाले आन्दोलन जरुरी भएको घोषणा ग¥यो । पार्टीका अध्यक्ष विमलप्रसाद यादवले राष्ट्रिय समृद्धिका लागि संवैधानिक प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्य स्थापना गर्न आन्दोलनको घोषणा गरिएको बताए । सरकार पछिल्लो समय दमनकारी बाटोमा लागेकाले जनताले अधिकार पाउन नसक्ने उनले दाबी गरे । पार्टीका महासचिव गोविन्द निरौलाले सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नसमेत रोकेको आरोप लगाउनुभयो ।	थप पढ्नुहोस्
राष्ट्रपति भण्डारीले आज अपराह्न ४ बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै
काठमाडौँ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम आज संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा ) को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गदैछिन् । चुनावी घोषणापत्रका आधारमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएपछि त्यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
सामाजिक सञ्जालमा ३ मन्त्री हटाउने समाचार भाईरल !
काठमाडौँ ।अहिले मुलुकका लागि सबैभन्दा जटिल समस्या र महारोगको रूपमा भ्रष्टाचार देखिएको छ । मुलुकमा कति भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुराको यकिन विवरण कसैले पनि सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। तर, हरेक दिन सबै क्षेत्र, सबै तप्का, सबै निकायमा भ्रष्टाचारले गाँजेको छ । भ्रष्टाचार नभएको कुनै पनि क्षेत्र भेटिँदैन ।	थप पढ्नुहोस्
काँग्रेसले चुनावमा हारेपनि कार्यकर्ताले हरेश खानु हुदैन : प्रवक्ता शर्मा
बैतडी । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली काँग्रेस रुपान्तरणको बाटोमा गएको बताएका छन् । नेपाल तरुण दल बैतडीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाली काँग्रेसले चुनावमा हारे पनि कार्यकर्ताले हरेश खानु पर्दैन, सशक्त प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेर सरकारले गरेका गलत कामलाई सशक्त रुपमा विरोध गर्नेछ भने । नेपाली काँग्रेसले माओवादीलाई जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको, काँग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान बनेको, काँग्रेसकै नेतृत्व हुँदा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकाले काँग्रेसको देश निर्माणमा ठूलो भूमिका रहेको उनले स्पष्ट पारे ।	थप पढ्नुहोस्
माओवादीले एकीकृत पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय समिति सदस्य आज टुंगाउँदै
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो तर्फबाट रहने नेताको नामावली टुंगाउने अन्तिम तयारी भैइरहेको छ । पार्टी घोषणा पश्चात आ–आफ्नो भागमा परेको संख्याभित्र रहेर नामावली छनोट गर्न नेताहरु गृहकार्यमा लागेका हुन् । तत्कालिन माओवादीले आज ती नाम टुंगाउने भएको छ । तत्कालिन माओवादीले आइतबार दिउँसोसम्ममा स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा रहने नेताहरुको नामावली टुंगाउने एक नेताले बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा ४५ स्थायी र ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रय कमिटी रहने छ ।	थप पढ्नुहोस्
प्रदेश ७ मा प्रि–बजेट छलफल आज सकिँदै
धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को संसद्को बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। अर्थमन्त्री झपट बोहोराले संसदमा पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल हुनेछ। छलफल आज नै सक्ने प्रदेशसभा सचिवालयको तयारी छ। अर्थमन्त्री बोहोराले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता जेठ २ गतेको बैठकमा पेस गरेका थिए। शुक्रबारदेखि सांसदहरूले छलफलमा भाग लिएका थिए। शुक्रबार १२ जना सांसदले धारणा राखेका थिए। प्रदेशको समृद्धि र विकासमा आधारित भएर बजेट ल्याउन सांसदहरूले सुझाव दिएका थिए। प्रस्तावमाथिको छलफल आज सकिने संसद् सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ . पुर्नगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलको आजको बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको छ । पार्टी एकतापछि आज पहिलोपल्ट बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसद देवप्रसाद गुरुङले ओलीलाई दलको नेता बनाउने प्रस्ताव गरेपछि सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको हो । बैठक जारी छ ।	थप पढ्नुहोस्
दुइ पार्टी एकता असाधारण घटना– अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता सामान्य परिघटना नभइ असाधारण रहेको बताएका छन् । संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले एकता प्रक्रिया नेपालको मात्रै नभइ विश्वकै असाधारण घटना भएको बताए। कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन र नयाँ परिस्थितिमा समाजवादको यात्रा तय गर्नका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकताले मार्ग प्रशस्त गरेको उल्लेख गरे ।	थप पढ्नुहोस्